Andron'ny mpifankatia - Church of God Switzerland of the World
2019-01 mpandimby ny Magazine
2018-04 mpandimby ny Magazine
2018-03 mpandimby ny Magazine
2018-02 mpandimby ny Magazine
2018-01 mpandimby ny Magazine
MB 2020 Martsa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2021-01 > Andron'ny mpifankatia
Andron'ny mpifankatia - Andron'ny mpifankatia
Isan-taona amin'ny 14 febroary, ny mpifankatia manerantany dia manambara ny fifankatiavan'izy ireo tsy manam-pahataperana. Ny fanao amin'izao andro izao dia miverina amin'ny fetin'i St. Valentinus, natolotry ny Papa Gelasius tamin'ny 469 ho andro fahatsiarovana ho an'ny fiangonana iray manontolo. Betsaka ny olona mampiasa an'ity andro ity hanehoany ny fitiavany olona iray.
Arakaraka ny tantaram-pitiavantsika no manoratra tononkalo ary milalao hira ho an'ny olon-tiany na manome vatomamy mamorona fo amin'ity andro ity izy ireo. Ny fanehoana fitiavana dia mitaky drafitra be ary misy vidiny. Tao an-tsaina ireo eritreritra ireo dia nanomboka nieritreritra momba an Andriamanitra sy ny fitiavany antsika isika.
Ny fitiavan'Andriamanitra dia tsy toetrany, fa ny fotony. Andriamanitra mihitsy dia fitiavana namboarina: «Izay tsy tia dia tsy mahalala an’Andriamanitra; satria Andriamanitra dia fitiavana. Ary tao no niavian'ny fitiavan'Andriamanitra tamintsika, dia ny nanirahany ny Zanani-lahy Tokana tamin'izao tontolo izao, mba hahavelona antsika amin'ny alalany isika. Izao no idiran'ny fitiavana: tsy ny nitiavantsika an'Andriamanitra, fa ny nitiavany antsika, ka nirahiny ny Zanany hanonitra ny fahotantsika » (1 Jaona 4,8: 10).
Matetika ny olona iray dia tsy mijery ireo teny ireo ary tsy miato, aza mieritreritra ny nanehoana ny fitiavan'Andriamanitra tamin'ny fanomboana ny Zanany. Na dia talohan'ny nahariana an'izao tontolo izao aza dia nanapa-kevitra ny hanolotra ny ainy ho an'ny famoronan'Andriamanitra tamin'ny fahafatesany. "Fa Izy no nifidianany antsika talohan'ny nahariana izao tontolo izao, mba ho masina sy tsy manan-tsiny isika eo alohany amin'ny fitiavana" (Efesiana 1,4).
Ilay namorona ny vahindanitra cosmika sy ny zava-tsarotra tsy misy kilema an'ny orkide dia hanome an-tsitrapo ny habeny, ny lazany ary ny heriny ary hiaraka amintsika olombelona, ​​amin'ny maha-iray antsika, eto an-tany. Saika tsy ho takatsika mihitsy izany.
Tahaka antsika koa i Jesosy dia niangona tamin'ny alina ririnina mangatsiaka ary niaritra ny hafanana namindro tamin'ny fahavaratra. Ny ranomaso nilatsaka teo amin'ny takolany rehefa nahita ny fijaliana manodidina azy dia tena izy toa antsika koa. Ireto marika lena eo amin'ny tarehy ireto no marika mahavariana indrindra amin'ny maha-olombelona azy.
Fa maninona no lafo be toy izany?
Mba hamenoana izany rehetra izany dia nohomboana tamin'ny hazo fijaliana an-tsitrapo izy. Fa maninona no io no karazana famonoana mahatsiravina indrindra noforonin'olombelona? Nokapohan'ny miaramila voaofana izy, izay, talohan'ny namantsihany azy tamin'ny hazo fijaliana, dia naneso sy naneso azy. Tena ilaina ve ny manindry satro-tsilo amin'ny lohany? Fa maninona no nororan'izy ireo? Fa maninona ity fanalam-baraka ity? Azonao an-tsaina ve ny fanaintainana rehefa natsipy tao amin'ny vatany ny fantsika be volo? Sa rehefa nihamalemy izy ary tsy zaka ny fanaintainana? Ny tabataba be rehefa tsy afaka naka aina izy - tsy azo an-tsaina. Ilay spaonjy nandrotsaka vinaingitra azony taoriana kelin'ny nahafatesany - maninona izy no anisan'ny fizotry ny fahafatesan'ny zanany malalany? Avy eo dia mitranga ny tsy mampino: ny Ray, izay tao amin'ny fifandraisana maharitra lavorary tamin'ny Zanaka, dia niala taminy rehefa naka ny fahotantsika izy.
Vidiny lafo tokoa izany hanehoana ny fitiavany antsika sy hamerenana amin'ny laoniny ny fifandraisantsika tamin'Andriamanitra. Tokony ho 2000 taona lasa izay dia nahazo ny fanomezana fitiavana lehibe indrindra isika teo amin'ny havoana iray any Golgota. Nihevitra antsika olombelona Jesosy rehefa maty izy ary io fitiavana io no nanampy azy hiaritra ny fahavetavetana rehetra. Miaraka amin'ny fanaintainana rehetra nandalo an'i Jesosy tamin'izany fotoana izany dia azoko an-tsaina hoe nibitsibitsika moramora izy: «Ho anao irery ihany no anaovako izany rehetra izany! Tiako ianao!"
Rehefa mahatsapa ianao fa tsy tiana na irery amin'ny Andron'ny mpifankatia dia ampahatsiahivo ny tenanao fa tsy misy fetra ny fitiavan'Andriamanitra anao. Niaritra ny horohoro tamin'io andro io izy mba hahafahany mandany ny mandrakizay miaraka aminao.
"Fa fantatro fa na ny fahafatesana na ny fiainana, na ny anjely, na ny hery, na ny fahefana, na ny ankehitriny na ny ho avy, na ny ambony na ny lalina, na ny zava-boahary hafa dia tsy mahay manavaka antsika amin'ny fitiavan'Andriamanitra izay ao amin'i Kristy Jesosy Tompontsika" (Romana 8,38-39).
Na dia andro malaza hanehoana fitiavana olona iray aza ny Andron'ny mpifankatia, azoko antoka fa ny andro fitiavana lehibe indrindra dia ilay andro nahafatesan'i Jesosy Kristy Tompontsika ho antsika.
by Tim Maguire
© COPYRIGHT 2021 - NY FIVORIANA AN'ANDRIAMANITRA (SWITZERLAND) - CONTACTS - LEGAL NOTES - Fitsipika - CONTACT